Samachar Batika || News from Nepal » चट्याङ के हो ? यसको क्ष’तिबाट कसरी बच्ने ?
चट्याङ के हो ? यसको क्ष’तिबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौँ – बर्खायाम सुरु भएसँगै दैनिक रुपमा चट्याङ परिरहेको हुन्छ । चट्याङबाट धेरै धनजनको हा’नि–नोक्सानी हुने, मानिसका आँखामा असर गर्ने, ठूलो आवाजको कारणले कानको जाली फुट्ने, घरका सिसा फुट्ने, वन–जंगलमा आ’गलागी हुने, रूख–बिरुवा म’र्ने, जन्तु–जनावरहरू मर्ने आदि जस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
वर्षायाममा वायुमण्डलमा विपरित दिशाका तीव्र गतिको वायु एक आपसमा ठोक्किदा वा घ’र्षण हुँदा चर्को आवाजसहित बढी भोल्टको विद्युतीय लहर उत्पन्न भई खास बाटो बनाएर जान्छ, यसलाई चट्याङ भनिन्छ । यो अचानक हुने विद्युतीय वि’स्फोटन हो ।
३) बादल र जमिनबीचको चट्याङ – बादलबीचको ठक्करबाट उत्पन्न भएर जमिनसम्म आइपुग्ने चट्याङलाई बादल र जमिनबीचको चट्याङको रुपमा लिन सकिन्छ । यो निकै नै खत’रनाक हुन्छ । यो पनि दुई प्रकारको छ । एउटामा बादलको तल्लो भागमा रहेको ऋणात्मक चार्ज जमिनतिर पर्छ भने अर्को माथिल्लो भागबाट धनात्मक चार्ज जमिन तर्फ खस्छ ।
सामान्यतया चट्याङ लागेका जनावर वा मानिसको मृ’त्यु भएको पाइन्छ । तर चट्याङमा परेर मर्ने मात्र होइन धेरै मात्रामा घा’इते पनि हुने गर्दछन् । चट्याङ विशेषज्ञ शर्माका अनुसार चट्याङबाट घा’इते हुने धेरैमा विभिन्न मानसिक र शारीरिक दीर्घरोग देखा पर्छन्। कोही बेहोस हुन्छन, कसैको बोली, कान र आँखा बन्द हुने, स्मरणशक्तिमा ह्रास आउने, शरीर लाटो हुने, रिँगटा लाग्ने, जोर्नी कडा हुने, मांसपेसी बाउँडिने, डिप्रेसन हुने हुन्छ ।
हुन त चट्याङ प्राकृतिक कुरा हो कहाँ कहिले पर्छ सजिलै थाहा पाउन सकिँदैन । तर पनि चट्याङ परेको बेलामा केही सावधानी अपनाउन सकिने हो भने यसको क्षतिबाट बच्न सकिन्छ ।
चट्याङले घा’इते भएमा के गर्ने ?
यदि चट्याङले घाईते भएको अवस्थामा उसलाई तुरुन्तै प्राथमिक उपचार गर्नुपर्छ । श्वासप्रश्वास वा धड्कन रोकिएको छ भने मुखमा मुख राखेर श्वास दिनुपर्छ ।
चट्याङले पोलेको, नसाहरुमा क्षति पुगेको छ, हाट टुटेफुटेको छ भने प्राथमिक उपचारपछि तुरुन्तै स्वस्थ्य चौकी पु¥याउनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति १५ बैशाख २०७७, सोमबार ०४:०६